Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2013 |
Fifidianana 24 jolay 2013 : Hotontosaina fa amin'ny fomba hafa
2013-07-20 @ 01:33 in Politika
Mandeha dia mandeha ny fotoana, ary mihazakazaka toy izany koa ny andro fa i Madagasikara ihany no tafahitsoka tsy mety tafavoaka amin'ny krizy mahazo azy. Misy ny tsy manaiky intsony ny toe-draharaha saingy tsy afa-nitroatra, satria mbola miandry tarihina hatrany, na tsy mahita ny hevitra ho entina hanehoana izany fanafintohinana izany.
Misy kosa ireo miezaka ny mifamory ka niainga tamin'ny media sosialy (Facebook) haneho sy hanandratra ny feony amin'ny alalan'ny fihetsika atao am-pisainana. Nanangana ny vondrona tamin'ny alalan'ny Facebook ry zareo ary efa nanao ny hetsika ihany koa. Hetsika notontosaina ny andron'ny fankalazana ny famerenana ny fahaleovantena, nifanindry tamin'ny fotoana nanombohan'ny matso. Wake Up Madadascar no anaran'izany vondrona izany. Nahazo fanamarihana manokana avy tamina tranonkala mpisolelaka ny fitondrana io hetsika io ary avy tamin'ny anarany amin'ny teny anglisy no tena namelezana azy. Nolazaina ihany koa ho saribakolin'ilay mpanolotsaina avy amin'ny masoivoho vahiny iray teto amin'ny firenena ihany koa moa ireo vondron'olo-tsotra te-handray andraikitra maha-olo-pirenena fa tsy hijanona ho olo-pehezina (vahoaka no nosoratany!) na valalabemandry! Mbola maro hafa ihany koa ny kiana nataon'ny olona sasantsasany manana sehatra itenenana amin'ny mpihaino maro saingy tsy nahakivy ireto vondron'olom-pirenena ireto izany.
Niditra tamin'ny dingana faharoa ry zareo ny andron'ny 18 jolay nentina hilazalazana an'i Nelson Mandela ary naka toerana anaty trano afovoan-tanàna iray nanaovana izany. Tetsy amin'ny Tahala Rarihasina io ary natao hamohazana ny olona hifoha amin'ny torimasony sy haka ny sata maha-olompirenena manana andraikitra hanarina an'i Madagasikara azy. Nihanivaingana kokoa ny hetsika niainga tamin'ny aterineto tamin'io fotoana io, satria tsy vitsy ireo olona nandalo teny. Taorian'ny hetsika ankalamanjana notandremana fatratra tsy hisian'ny fihoara-pefy dia naharitra ora maromaro kokoa indray ity fotoana ity. Tsorina fa midera izay fomba fiasa izay ny mpanoratra. Tsy mahalala aho raha nisy ny fanentanana tamin'ny haino aman-jery fa nafana kosa ny fanentanana tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy. Ho avy indray ny dingana manaraka ary amin'io herinandro io izany!
Ny andron'ny 24 jolay 2013 no nokasaina hanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara, nitsaha-ketrika tampoka anefa io fotoana io rehefa noforonina ny olana eo amin'ny tontolo politika. Hanamarika izany amin'ny fombany anefa ry zareo ao amin'ny Wake Up Madagascar, heveriny ho toy ny hisy ihany io fifidianana io ary efa mampiomana ny rehetra sahady ry zareo hanaraka tsy tapaka ny pejiny hamoahan-dry zareo amin'ny antsipirihany ny karazam-pifidianana hatao amin'izany andro izany. Raha namaky ny lahatsoratry ny namana iray anefa ny tena dia afa-mitarataratra sahady hoe tahaka ny ahoana no mety ho atao amin'io fotoana io. Karazana hetsika hitondrana hetaheta izay miompana amin'ny hoe "Satria tsy avela hifidy isika". Tena mandeha isan'ambaratongany ny zavatra tontosaina, ary mihevitra aho hatreto fa tena manao azy am-pisainana ry zareo mpikarakara. Ny mampiavaka azy ity dia ilay hetsika niainga manokana tamin'ny tambajotra sosialy fa tsy avy amin'ny haino aman-jery loatra nefa dia irariana sahady ny ho fahombiazany.
Nahoana tokoa no tsy hirary ny fahombiazany raha mitondra ilay hetahetan'andian'olompirenena ry zareo [Valalabemifoha]? Hatreto ankasitrahako ny zavatra ataony sady mitandro hatrany ny tsy isian'ny fandrobana na vakitrano ry zareo. Nanoratra izao aho ho fampahafantarana anao mpamaky fa misy ny fandraisana andraikitra ataon'olompirenena eo anivon'ity krizy ity ka sao mba mahaliana anao ihany koa ny zavatra ataony. Karazam-panoroan-dalana hamoahanao ihany koa ny hevitrao, ny hetahetanao, ny tsikera avy aminao ho hitan'ny besinimaro tsy ilàna herisetra na korontana. Entina hamaranana, karazana torohevitra ihany: aza miankina amin'ny sms ianao fa mety ho ora dimy na enina, eny, mety ho ny ampitso na andro maromaro mihitsy aza vao mety ho tonga any amin'izay iantefany iny fa antso mivantana atao. Efa fantatry ny mpikarakara ny Wake Up Madagasikara angamba izany ka izay no nandrisihany ny olona hanaraka hatrany ny pejy ofisialiny fa tsy amin'ny toeran-kafa! Mirary soa ho an'ny Wake Up Madagascar, mirary fahendrena sy fahombiazana... Ho anao olom-pirenena manana kaonty Facebook kosa: raha ankasitrahanao ny ataon'ireo mpikarakara ny Wake Up Madagasikara dia tsindrio ny "J'aime" na ny "Like" ao amin'ny pejy Facebookn-dry zareo...
Jentilisa 20 jolay 2013